Dalagyada | February 2020
Talooyinka beerista iyo daryeelka ee muusiga
Qof walba wuu ogyahay waxa maskaxda ka jiraa. Millet waa warshad sannadle ah oo qoyan oo ka tirsan qoysaska firida. Dhaqanka wuxuu leeyahay naqshadeeye-qaabeeya oo leh tiro badan oo cufan ah oo ka soo jeeda xididada. Cudurka inflorescence waa paniculata, baaluq kasta wuxuu leeyahay laba ubax - bisexual iyo asexual. Dhegta warshad waa mid is dul saaran oo dhinac ah, oo ku dheggan dhinaca kale.
Masagada miraha waa mid ka mid ah firilayda ugu caansan, cawska iyo cuntada, taas oo si weyn loo yaqaan sida cuntada xayawaanka dufan leh. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, cawsku wuxuu helay sumcad weyn oo ka mid ah taageerayaasha nafaqada habboon ee nafaqada iyo nafaqada, kuwaas oo ku talinaya in masaggada lagu daro cuntada si ay u daawadaan miisaankooda.
Horumarinta iyo masagada beeraha ee cagaarka cagaaran, silage iyo hay
Masaggada ayaa ah mid aan loo aqoonin warshadda firileyda ah ee dhulkeena, taas oo koraysa Afrika, Aasiya, qaybo ka mid ah Ameerika, Australia iyo Yurub. Dhaqanka ayaa qiime u leh cuntada waxaana sidoo kale loo isticmaalaa cuntada xayawaanka. Warshadku waa alaabo ceeriin ah oo soo saarta burka, burcadka, khamriga (bioethanol) iyo firileyda, iyo sidoo kale malab hadhuudh ah.
Isticmaalaya galley sida siderata
Si tartiib ah, qoryaha qoyan ee usbuucyadu waxay u degsan yihiin siderar. Dalagyada dalaggu waa il heer sare ah ee bacriminta dabiiciga ah iyo beddelka digada. Dhaqamada kala duwan waxay u dhaqmi karaan sida sideratka, laakiin rye waa kuwa ugu caansan. Rye sida siderat: muuqaalada Rye waa geedo sanadle ah ee qoyska badarka.
Markaad go'aansatay inaad dhul beertiisa ku beertay galley, ma aadan qaldantin. Tani waa ikhtiyaarka guusha-guuleysta, haddii kaliya sababtoo ah dhaqanka qoyaanku waxaa loo isticmaalaa bacriminta cagaaran iyo daawada carrada. Собранному урожаю тоже найдется применение - существует множество кулинарных и медицинских рецептов, главным ингредиентом в которых выступают зерна, отруби и даже стебли ржи.
Ukraine waxay abuuri doontaa dalagga gogosha horraantii 2.4 milyan oo hektar ah
Sida ay soo warisay Wasaaradda Beeraha iyo Raashinka Ukraine 27-kii Febraayo, gobollada koonfureed ee Ukraine ayaa qorshaynaya in ay bilaabaan dalagyada miraha xilliga guga ee maalmaha soo socda, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada. Guud ahaan, waddanku wuxuu ku beeri doonaa dalagyada guga oo dhan oo dhan 7.2 milyan oo hektar ah, oo ay ka mid yihiin xilliga hore ee dhirtu - 2.4 milyan oo hektar oo dhul ah.
Sifooyinka ee fescue sii kordhaya ka soo abuur
Fescue waa caleemo dhir qashin ah oo ka tirsan qoysaska firileyda. Waxay gaadhi kartaa dhererka 1.2 ilaa 2 m. Ovsyanitsya waxaa laga yaabaa in laga yaabo in caanaha ugu caansan ee geedaha cagaarka ah iyo naqshadeynta muuqaalka. Doorashada meel loogu talagalay fescue: meelo kulul, qallalan iyo qorrax leh, waxay ku haboonaan doonaan xafladaha. Tan waxaa laga yaabaa in ay iftiimiso dhinacyada koonfureed ama jardiinka dhagaxyada, tan iyo xataa heerkulka ugu sarreeya ma aha mid halis u ah geedka.
Triticale: sharaxaad iyo kobcinta of hybrid ee galley iyo sarreen
Maqaalkani waxa uu doortay qalab loogu talagalay in uu kugula socodsiiyo dalaggii miraha gaarka ah, oo leh magac iyo wax aan caadi ahayn - "triticale." Waa maxay nooca dhirta uu yahay, sababta triticale loo beeray iyo waxa ay tahay tiknoolajiga ay beerashada, akhriya hoos. Triticale - waa maxay Triticale - waa wax soo saarka gacmaha.
Waa maxay ari waxtar leh
Laga bilaabo carruurnimada, waxaan maqli karnaa nafaqada saxda ah ee caafimaad leh, qaybta ugu weyn ee laga rabo inay noqoto mid laga helo carbohydrates muhiim ah oo ka mid ah mid ka mid ah kuwa ugu faa'iido badan leh oo nafaqo leh waa boorley beedeed. dhaawaca isaga
Badanaa, tagista filimka ama xarunta madadaalada, waxaan iibsanaa baaldi oo dhan oo daanjoog ah. Sidaa darteed delicious, iyo filimka (ama muujinta) u muuqataa xiiso badan. Waxyaalaha maqalka ah, oo ay ku jiraan kalooriyooyin yar, waa lagu karin karaa guriga. Noocyada ugu wanaagsan Qof walba wuu ogyahay waxa dufanka laga sameeyey. Laga soo bilaabo galley. Laakiin cid kastaa way ogyihiin in noocyada kala duwan aysan ku habboonayn diyaarintiisa.
Badarka - noocyada waaweyn
Dhererka waa dhirta qaybta monocotyledonous, kuwaas oo ku jira qoyska Meatlikov. Tani waxaa ka mid ah galley, miro, ari, karaboor, iwm. Ujeedada koritaanka dalagga warshadaa waa hadhuudh. Tani waa sheyga ugu weyn ee loo isticmaalo in la sameeyo baasto, rooti iyo keega kala duwan.
Waa maxay xanuujinta cayayaanka halista ah iyo sida loola dagaalamo?
Xayawaanku waxyeelo badan kama soo dhex galo guryaha ama guryaha waddanka, waxay u gooyaa dalagyada beeraha iyo maqaarka, halkaas oo dambe loo kaydin karo. Kobcinta hadhuudhka, waxaa suurtagal ah in la ogaado sifooyinka tayada ee hadhuudhka. Waxyeelo kala duwan ayaa wax u dhimi kara dhaqanka, laakin waxay khaas u tahay khasaare keeni kara waxyeelo halis ah, kaas oo lagaga hadli doono maqaalkiisa dambe.
Herbicide "Granstar": habka iyo waqtiga codsiga, isticmaalka
Cagaarshowga ayaa muddo dheer la xaqiijiyay inuu yahay hab wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo loogu talagalay xakamaynta cawska beerta beerta ama beerta. Inkasta oo ay jiraan wax ka reebitaan ah, ninkii beerta ku shaqeyn lahaa ma sameyn karo "daawooyinkaas". "Granstar" ayaa ka mid ah cayayaanka ugu caansan. Habka firfircoon iyo foomka diyaarinta Hawlgalkeeda waxaa fuliya walax gaar ah - tribenuron-methyl oo ah saamiga 750 g / kg.
Herbicide "Helios": qiyaasta, barista
Bannaanka u badan ayaa la kulmay dhibaatada dhacdooyinka soo noqnoqda ee haramaha. Xaaladahan oo kale, waxaa lagama maarmaan ah in si dhakhso ah loo helo daroogo udub dhexaad u ah dagaalka. Waxaan u soo jeedineynaa maqaalkan, kaas oo lagu soo bandhigi doono tilmaamo ku saabsan codsiga "Helios". Habka firfircoon, foomka sii deynta, baakadaha Qaybta ugu weyn ee ka kooban qayb ka mid ah geedaha ka soo baxa waa glyphosate, taas oo ka mid ah xeryaha fosfooraska-organic.
Mogar Chumiza (bristle): daryeelka dhirta iyo sifooyinka wanaagsan ee cawska
Mawduucyada, Mogar Chumiza, jiir, caleemaha - dhammaan magacyadani waxay tixraacaan hal warshad Setaria italica, oo laga helo aagagga xajmiga iyo keynta. Waxay leedahay sifooyin faa'iido leh, oo loo isticmaalo beeraha, naqshadeynta muuqaalka iyo daawada dhaqameed. Wax badan ayaan ka baraneynaa halbeegga kiimikada, sifooyinka faa'iidada leh iyo qaababka kalluunka sii kordhaya.
Qodobbada waxtarka leh ee hadhuudhka ragga, haweenka iyo carruurta
Corn, kaas oo sidoo kale loo yaqaan 'galley', waa alaabo qiimo leh qiimaha cuntooyinka wax soo saarka iyo quudinta xoolaha. Waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa warshadaha, daawada iyo kiknoolajiyada. Ku saabsan halabuurka, sifooyin qiimo leh, muuqaalada isticmaalka iyo kaydinta waana la falanqeyn doonaa. Qaybta kiimikada ah Corn waa waa warshad qashin ah oo gaadhaysa afar mitir oo dherer ah waxayna ku ballaarantaa dhulka 1 mitir iyo badh.
Noocyada caanka ah ee hadhuudhka
Sweetcorn waxeey ogyihiin qof kasta oo ka yimi carruurnimada. Dhirta dahabiga ah waxay leeyihiin dhadhan gaar ah, mana jiro hal warshad oo ugu yaraan ku celin karta dhadhanka jiilaalka. Maanta, dalagga dalagga waxa uu ku jiraa mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee dalagga beeraha sababtoo ah iyada oo aan qabyo ahayn beerashada iyo isticmaalka kala duwan.
Sida loo bacrimiyo dalagyada: qiimaha codsiga
Biyaha, kuleylka, iftiinka iyo nafaqooyinka ayaa lagama maarmaan u ah horumarinta saxda ah ee dalagyada miraha iyo helitaanka waxsoosaar wanaagsan. Tan ugu muhiimsan walxahan ka dib oksijiin, kaarboon iyo hydrogen waa macdan - nitrogen (N), fosfooraska (P) iyo potassium (K). Inkasta oo ay joogaan qeyb ka mid ah ciidda, qadarkoodu waa ku filnayn, taas oo keenaysa baahida loo qabo bacriminta kiimikada.
Tilmaamaha sarreenka, beerashada, dhalidda
Hilibka waa mid ka mid ah dalagyada cuntada ugu weyn ee adduunka. Cawska ayaa loo beeray tan iyo wakhtiyadii hore waxaana loo qaybiyaa aduunka oo dhan. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa sifooyinka nafleyda ee sarreenka guga, iyo sidoo kale sifooyinka dabiiciga ah ee beerahooda. Tilmaamid Tani waxay ka mid tahay qoyska badarka iyo caleenta buunshaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dalagyada 2020